Al Marfuuc | U adeeg Xadiith-ka Rasuulka
Xadiiska Marfuuca ahi Maxuu yahay?
Luqad ahaan: Marfuuc macnaheedu waa koryeelid ama sareeyn waxayna ka timid kalmada رفع ,kelmadaas oo kasoo horjeeda kalmada وضع oo loola jeedo hoos u dhigid ama hooseeysa. Halkaa waxaynu ka faaideynaa in xadiiska Marfuuca ah loo nisbeeynayo ama loo tiirinayo suubanaha maqaamka sareeya leh ahna Nebiga sallalahu calayhi wasalam.
Isdilaax ahaan : Waa xadiis walboo loo tiiriyo Nebiga sallalahu calayhi wasalam ha ahaado hadal, ficil, sifo iyo taqriir(wax agtiisa lagu sameeyay Nebiga sallalahu calayhi wasalam waxaasoo uuna reebin ama ka hadal ).
Xadiiska Marfuuca ah waa xadiiska loo nisbeeyo ama loo tiriyo Nebiga sallalahu calayhi wasalam, waxaas loo tiirinayana ha ahaado hadal , ficil ,sifo iyo taqriir.
Qofkan Nabiga sallalaahu calayhi wasalllam u tiirinaya ficilka,sifada,taqriirka ama hadalka , lama eegayo ma saxaabi baa mise mahan. Sidoo kale lama eegayo isnaadku miyuu xidhiidhaa mise mayya. Muhiimada ugu weyni waa yaa loo tiirinayaa waxan. Haddii uu yahay isnaadku mid xidhiidhan waxaa la odhan Mutasil marfuuc. Haddii uu Taabici ka boodo saxaabi oo si toos ah uga weriyo Nabigana waxaa la odhan Mursal.
Noocyada Xadiiska Marfuuca u qeybsamo
Waxaan horey u soo marnay in Xadiiska Marfuuca ah u qaybsamo 4 qaybood ( hadal, ficil, sifo iyo taqriir) hadaba iyagoo faahfaahsan waa kuwaan noocyadii Xadiiska Marfuuca ..
1– Marfuuc qowli ( marfuuc hadal ahaan ku yimid) . Tusaale : Inuu yiraahdo Saxaabi ama cid kaleba wuxuu yiri Rasuulku sallalahu calayhi wasalam sidaa
2– Marfuuc Ficli ( marfuuc ficil ahaan ku yimid) . Tusaale: Inuu yiraahdo Saxaabi ama cid kaleba wuxuu sameeyay Rasuuulku sallalahu calayhi wasalam sidaa
3– Marfuuc Taqriiri ( marfuuc taqriir ahaan ku yimid). Tusaale: Inuu yiraahdo Saxaabi ama cid kaleba waxaa lagu ag sameyey Rasuulka sallalahu caleyhi wasallam sidaa , lamana soo werin inuu Rasuulku diiday ama wax ka yidhi.
4– Marfuuc Wasfi ( marfuuuc sifo ahaan ku yimid). Tusaale: Inuu yiraahdo Saxaabi ama cid kaleba Wuxuu ahaa Rasuulkii Alle sallalahu calayhi wasalam midka ugu akhlaaq wanaagsan dadka ama sidaa ayuu ekaa iwm.
Xukunka xadiiska Marfuuca
Xadiiska Marfuuca ah wuxuu noqon karaa saxiix hadii laga helo dhamaan shuruudihii xadiiska saxiixa ah . sidoo kale wuxuu noqon karaa Xasan hadii laga helo shuruudihii xadiiska xasanka ah wuxuu kaloo noqon karaa daciif hadii laga waayo shuruudaha saxiixa ama xasanka .
Wallaahu tacaalaa aclaa wa axkam
WQ: Najma Saciid
from → Al Marfuuc, Duruus Yaryar Cilmul Xadiith
← Naasiru-sunnah Imaam Albaani
Al Qhariib →